पहुँचवालालाई घरमै खोप, घण्टौँ लाम लागेर ज्येष्ठ नागरिक खोपबिना नै घर फिर्ता - चौतारी पोष्ट अनलाइन
धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई खोप लगाउन नसके तेस्रो लहरको जोखिम झन् बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार कोरोना परीक्षण पनि न्यून गर्ने र खोपमा पनि ढिलाइ गर्दा संक्रमण झन् बढ्ने जोखिम हुन्छ। सहप्रवक्ता डा. अधिकारीका अनुसार अहिले औसत संक्रमणदर २२ प्रतिशत छ।अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
Prevकांग्रेस महाधिवेशन सर्ने निश्चित
Nextभाडा समायोजन र कोरोनाविरुद्धको खोप माग गर्दै ,यातायात व्यवसायीले निकाले र्‍याली